text aasaasiga ah ee KJV la taageeray by qoraal gacmeedyada hore | Apg29
By Bo Hagstedt, Guddoomiyaha, André Juthe Ph. D. ISWIDHISHKA KJV.
Maqaalkani waxa uu muujinayaa tusaale cad u ah sida doorashada ee qoraalka aasaasiga ah ee cusub ee u baxay inuu ka.
→ Download article sida file pdf ah.
Maqaalkani waxa uu muujinayaa tusaale cad u ah sida doorashada ee qoraalka aasaasiga ah ee cusub ee u baxay inuu ka. The iyo toban tusaalayaal ku jira warbixinta kooban ee qodobkan waxaa ka mid ah:
text aasaasiga ah ee KJV ah, Text Helay, ayaa taageero ka qoraallada reer Iskanderiya jir.
Markaasay shantii nin, kuwaas oo na siiyey text aasaasiga ah ee cusub, wuxuu lahaa carar ah qoraalka Byzantine.
Xaqiiqada ah in qaar badan oo ka mid ah u maleeyeen in Injiil asalka ahaa hadal faafin. Waxaa kacay markii eed gudbinta afka, oo kiniisadda ka dibna saxo. Waxay ku doodeen in qoraalka Byzantine waa qoraalka dambe wacdina taas oo uu saxo khaladaad ah in ay jiraan ahaayeen tan iyo bilowgii.
In haddii file hal qoraal gacmeedka ay ka mid yihiin qoraal gacmeedyada hore, waxay bixisaa taageero ereyada saxda ah si ay u doortay qalad ah, maxaa yeelay, waxay rumeysan yahay in gardarrada waxaa jiray tan iyo bilowgii of Church tan saxo. Laakiin shaqada this oo gebi ahaanba unbiblical, maxaa yeelay, Rabbigu wuxuu leeyahay, in Qorniinku oo dhan la siiyo by Ruuxa Ilaah, iyo inay tahay inuu ereygiisana waan xajiyaa.
Aila Annala ku doodaya in qoraalka jir aasaasiga ah ka 1500s ah, Text ka Helay ku salaysan qoraal gacmeedyada 900-1200 qarnigii. Si kastaba ha ahaatee, tani waa quraafaad ah baxday. Runta waxa ay tahay in Text ku Helay waxa kale oo ku salaysan qoraal gacmeedyada ka weyn, taas oo qodobkan tijaabin doonaa. Waxaan in KJV waxay aaminsan tahay in Kitaabka Quduuska ah iyo qoraalka aasaasiga ah ayaa la sii raagayaan ilaa maantadan la dhex siiya Ilaah.
Qaar ka mid ah waqti ka hor, Aila Annala, turjumaan maamulaha nuBibeln, maqaal ee Maanta World The halkaas oo ay ku dooday in aan dadka Masiixiyiinta ah waa in aan ku doodi ku saabsan Kitaabka. Waxay sheegtay in Sweden waxaan leenahay tarjumaadaha badan oo wanaagsan in kastoo aannu nahay dal yar iyo de-Christianized iyo in turjumaadaha kuwaas waa kaabaha. Aila ka xumahay in qaar ka mid ah dadka ku ashtakeeyaan Kitaabka Quduuska ah ee 2000 oo isku dayay in la burburiyo Ilaahnimada Masiixa. Waxay sidoo kale sheegay in tarjumaadaha newer ku salaysan qoraalka aasaasiga ah ee cusub ee ka 1970 waxay u badan tahay in ay sameeyaan si fiican sababtoo ah in aan hadda haysanno weyn in qoraallada ka weyn helaan.
Waxaan ka Swedish Oo waa fikrad ka duwan. Ma aha dhamaystiro of tarjumaadaha kala duwan ka horimanaya Caqiidooyin Christian aasaasiga ah. Annagu ma ku doodi ku saabsan Kitaabka Quduuska ah, laakiin dhinaca kale, waxaan rabnaa in aan difaaco Kitaabka Quduuska ah iyo qoraalka aasaasiga ah, waxaanu u rumayn, by siiya Ilaah ayaa sii raagayaan in aannu mar. In Ilaah loo ilaalin lahaa Hadalkiisu waa marag cad Kitaabka u gaar ah (Ishacyaah 40: 8. Neh 8:. 8. Sabuurradii 12: 6-7, 119: 152nd Matthew 5:18 Luuk 16:17 Rom 15:.... 4 1 1:.. 23-25). Waxa kale oo uu noqon doono mid aad u adag tahay in la isku hallayn Kitaabka Quduuska ah haddii aan ku tiirsanaan karin ay qoraalka sii raagayaan. Sidee ayaynu ku garanaynaa, waayo, tusaale ahaan, in aan helay mustaqbalka ee qoraallada ka weyn in ay ka sii gaabiyey badan qoraalka Iskanderiya ka dhigaysa qoraalka aan hadda rumaysan yahay ereyga Ilaah, ma aha run ahaantii waxaa jira? In dhamaadka, erayga Ilaah oo dhan hoos.
Kitaabka Quduuska ah ee 2000 yaraynaysaa Ilaahnimada Masiixa ma aha ashtako ah xaasidnimo, laakiin kaliya runta daacad ah. Waa ku filan tahay in uu akhriyo in Rome. 1: 4, halkaas oo sanadkii 2000 Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegay in Ciise ku rakiban sida Wiilka Ilaah by sarakiciddiisa dhintay ka soo sara. Laakiin Ciise kuma wargeliyay in Wiilka Ilaah by sarakiciddiisa - uu ku dhashay sida kan ahaa ina Ilaah iyo naftiisa, dhimashadiisa, sarakiciddiisa iyo waaridda oo dhan oo ahaa ina Ilaah. Intaas waxaa sii dheer, Ciise la odhan jiray Wiilka Ilaah oo gadh yar, iyo markii maalin maalmaha ka mid sujuudi jilibka iyo Ciise u ammaanayaa sida Eebihiin, Phil. 2:11, ayuu qoray mudane leh h yar, halka ugu yeeray Peter dhagaxii caasimada C a in Matt. 16:18.
Aila ayaa sheegtay FNns qoraalka ku jirta Falimaha Rasuullada. 9: 6 kaas oo intaa ku daray in Text ka helay. Waxa saxda ah waa in ay soo socda erayada ku sugan Falimaha Rasuullada. 9: 5-6 ka maqan ee ugu qoraal gacmeedyada Giriigga:
Aayadda 5. "Waa adag tahay si aad u harraatidid wax ku muda." Waa run in erayadan la la'yahay ee ugu qoraal gacmeedyada Giriigga laakiin waxay FNns la gacmeedyada Latin jir ah, Vulgate. Ereyada kale oo jira in a gacmeedyada Suuriya Peshitta iyo qoraal gacmeedyada Giriigga, code E, iyo 431, laakiin aayadda afar halkii. Intaa waxaa dheer FNns erayadan oo dhan qoraal gacmeedyada Giriigga ah ee Falimaha Rasuullada. 26:14.
Verse 6. "Labada gariir iyo yaabeen, wuxuu ku yidhi, Rabbiga, maxaad doonaysaa inaan kuu sameeyo? Markaasaa Rabbigu wuxuu ku yidhi isagii. "Ereyadan ayaa sidoo kale ka dhiman yihiin inta badan qoraal gacmeedyada Giriigga laakiin sida ereyada aayadda 5 FNns badan oo qoraal gacmeedyada Latin jir ah, Vulgate, iyo in qaar ka mid ah qoraalkii Suuriya iyo Coptic qadiimiga ah. In FNns sii dheer sidoo kale erayadan oo dhan qoraal gacmeedyada Giriigga sida erayada V5 in meel kale in kitaabka Falimaha Rasuullada (Falimaha Rasuullada. 22:10).
The xaqiijin ugu muhiimsan ee erayada aayadda 5 iyo 6 waa dhab ah waxaa la xaqiijiyay by Kitaabka Quduuska ah, by qoraalka isku u muuqataa in laba meelood oo kale oo ku sugan Falimaha Rasuullada, Acts. 22:10, iyo 26:14.
Sida ay helaan qoraallada ka weyn, waa run in maanta waxaan haysannaa weyn in qoraallada ka weyn helitaanka badan waxay lahaayeen in 1500s ah. Aila ku doodaya in qoraalka jir aasaasiga ah ka 1500s ah, Text ka Helay ku salaysan qoraal gacmeedyada 900-1200 qarnigii. Si kastaba ha ahaatee, tani waa quraafaad ah baxday. Runta waxa ay tahay in Text ku Helay waxa kale oo ku salaysan qoraal gacmeedyada ka weyn. Aila weydiiyay in uu line final oo qoraal gacmeedyada waa kuwan. Hadda waxaan kuu sharxi doona waxa kuwanu yihiin. Laakiin marka aan eegno in qoraal gacmeedyada hore ee Giriigga, taas oo ka 350 ilaa 400 ee, sidaas darteed waxaa laga yaabaa in ay eegaan ka duwan maris Kitaabka Quduuska ah si kale. Laakiin aynu eegno qoraallada ka 500 ilaa hore 1500s sida qoraal gacmeedyada Byzantine ee intooda badan waadaxa oo ay ku jiraan heshiis fiican.
Metzger ayaa qirtay in "The History of NT qoraal naqdiyay" qoraalka Byzantine ayaa sii raagayaan läsvariation ah in la taariikhaysan kartaa in qarnigii labaad ama saddexaad ka dib markii laga helay qoraal gacmeedyada caw, P45, P46 iyo P66.
fikradaha falsafada iyo fiqi ahaaneed saamayn habka ururinta
Ka hor inta aynu eegno marinnada gaar ah, in aan marka hore doonayaa inaan iraahdo in aanu hore ku dooday in articles dhowr ah, iwm dhabta ah ee qoraallada Byzantine. gacmeedyada waxay leeyihiin joogtona weyn oo uu leeyahay - sida aannu u aragno - iyada siiya Ilaah raagayaan qoraaladii asalka ahaa ee aasaasiga ah. Eebe wuxuu u yaboohay si loo ilaaliyo uu Word, iyo haddii aan la Text ka Helay waa erayadii Ilaah la ilaashaa, qoraalka waa in Aila aaminsan yihiin in Ruuxa Quduuska ah ayaa sii raagayaan iyada oo qarniyo ka? Waa wax iska cad in dhan taariikhda ayaa dadka, sida Origen, Eusebius, Westcott iyo Hort eegista doortay akhrinta sida meesha ilaahnimadiisa Ciise cadda waayo, ma ay rumaysan in Ciise uu ahaa nooca la mid ah sida Aabbaha. Waxaa runtii waa arrin la filayo,
Habka xulashada antibysantisk Selective
Hadda waxaan ku siin doonaa tusaale la taaban karo oo ku saabsan sida habka doorashada ee doorashada noocan oo kale ah ku heshiiyeen in ay in times casriga ah. Waayo, waxaa inoo fahmaan sida doorashada ee qoraalka u soo baxeen inay, waxaan sidoo kale u baahan tahay in aad ogaato wax ku saabsan shantii nin oo 1970-na siiyey qoraalka cusub ee aasaasiga ah iyo model shaqada ay jireen. Waa maxay nooca qoraallada fadilay shantii tafatirayaasha? Carlo Martini of Church Catholic soo bandhigay qoraal gacmeedka ah Vaticanus, yaa ka Alexandria. Bruce Metzger ma isticmaalaan qoraalka Byzantine sida uu tixgeliyo inuu noqdo musuqmaasuq. Allen Wikgren doonayay in ay isticmaalaan qalabka waxbaridda jir ah in ay isku dayaan in ay soo celiso qoraaladii asalka ahaa. Taas macnaheedu waxa weeye isagu ma doonayaan in ay isticmaalaan qoraalka heli helay qoraal gacmeedyada Byzantine iyo Text ka helay, laakiin uu doonayo in uu soo celiyo qoraalka ah ee foomka asalka ah u maleeyeen ka weyn iyo in ka badan iyada oo qoraal gacmeedyada in ka Alexandria yimid. Matthew Black dareemay in nooca qoraalka Byzantine ma ahaa asalka ah, laakiin la mideeyey dambe iyo kuwa kale oo Aataad text wacdina. Ugu dambeyntii, waxaan leenahay Kurt Åland sidii labada mas'uul ka ah qoraalka Giriigga yihiin, NestleAland 1979 (Ehelu Kitaabka Quduuska ah iyo nuBibelns qoraalka aasaasiga ah), iyo Text United Bible Societies Greek, 1975 (Bible 2000 qoraalka aasaasiga ah). Åland dareemay in aanay ka dhigi kara isticmaalka nooca qoraalka Byzantine, maxaa yeelay, waa ku tacaluqda in la dhiso qoraaladii asalka ahaa. Waxaan aragnaa in shan dhan ku heshiiyeen in ay isku dayi doonto in ay cilinta qoraal ah oo dheeraad ah asalka ah oo leh qoraal gacmeedyada hore laga Alexandria, oo wuxuu arkay nooca qoraalka Byzantine in mar dambe ku biireen iyo kuwa kale oo Aataad text wacdina. Waxaa intaa dheer, sida ay labada Black iyo Metzger in injiilka asalka ah ee faafidda hore afka hor u saxiixay hoose iyo sidaas kacay khalad ah. (5. Black, p. 633. 6. Metzger, p. 86) qaladka sixi tan iyo kaniisadda si uu qoraal gacmeedyada Byzantine, hoos aragtiyahan ragga.
Metzger si cad u sheegayaa model shaqada ay mid ka mid ah buugaagta uu, "Marka qoraal gacmeedka Aabbaha ah Church ee ka duwan on maris Kitaabka Quduuska ah, inta badan waa sida ugu fiican si ay u aqbalaan sida ka duwan qoraalka diinta dadka danbe (Byzantine ama Vulgate)". (1. Metzger, bogga 87) helay, in doorashada ee xigasho oo ka Aabbayaashow, laakiin waxaan si cad u arki doonaa in this sidoo kale shaqada aasaas u ah xulashada of text Kitaabka Quduuska ah sababtoo ah qoraalka.
gacmeedyada Muhiim qadiimiga ah
Waxaa FNns dhowr ah oo qoraal gacmeedyada hore, ku qornayd warqadihii waaweyn, kuwaas oo si gaar ah muhiim u ah tifaftirayaasha, kuwaas oo ahaa, maxaa yeelay, waxay ahaayeen aad buu u gaboobay. Inta badan, qoraal gacmeedyada ee caasimadaha ka wayn kuwa la xarfaha hoose. In warkayagii, waxaan soo ururiyay xogta inta badan ka mid ah buugaagta ee ja Moorman, qoraalladii hore, Aabbayaashow Church, iyo Version Idman, (4. Moorman) iyo Bruce M. Metzger ee buugga, Commentary A qoraal on New Giriigga Testament, (2. Metzger) halkan waxaa ku qoran liiska qaar ka mid ah qoraallada ku qornayd warqadihii waaweyn:
Code Sinaiticus (Alef) ka 300 ee. Waxaa ku jira Axdiga Cusub oo dhan.
Code Alexandinus (A) by 400 ee. Waxaa ku jira ku dhowaad dhammaan Axdiga Cusub.
Code Vaticanus (B) by 300 ee. Waxaa ku jira ku dhowaad dhammaan of Axdiga Cusub, marka laga reebo afarta buugaagta ee ugu danbeysay ee Axdiga Cusub.
Code Ephraemi Rescriptus (C) 400 ee. Waxaa ku jira Axdiga Cusub.
Code Bezae Cantabrigiensis (D) by 400 ee. Koobsanayaa Injiillada iyo Falimaha Rasuullada.
Code Claromontanus (D) by 500 ee. Miyuu warqadaha Bawlos ee Giriigga iyo Latin.
Code Basilensis (E) ka 700 ee. Ka kooban yahay Injiillada.
Code Washingtonianus (W) by 400 ee. Ka kooban yahay Injiillada.
Intaa waxaa dheer FNns jajabkii ka tiro ka mid ah qoraallada ku jira xitaa ka weyn iyo waxaa loo yaqaan gacmeedyada caw ah. Hadda waxaan eegi doonaa qaar ka mid ah aayadaha Bible gaar ah si ay u arkaan model shaqada, kuwaas oo shantii nin codsatay.
Yooxanaa. 7: 8 wali la la'yahay in qoraallada qaarkood
In Yooxanaa. 7: siddeedaad Ciise ayaa sheegay in aayadda 8 inuu aan u kicin inay iidda Yeruusaalem oo ku jirta aayadda 10 waxa ay sheegay in Markii walaalihiis iiddii u kaceen, ka dibna waxa uu sidoo kale halkaas ka tegey. gacmeedyada badan ayaa weli waxay leeyihiin ereyga. Eraygii weli waa muhiim sababtoo ah haddii ay ka maqan, ma aha Ciise ee runta ka hadlay. Oo isla markii eraygaasu weli FNns qoraal gacmeedyada hore sida far caw ah 66 iyo 75 iyo qoraalka dhaleecayn 'jecel Vatican, waa in ay doorteen läsarten ah. Halkan waxaan ku arki kartaa kooban oo ka mid ah qoraallada ugu da'da weyn;
Waxaan u aragnaa in isku duwidda ee taageero si ay xataa la ah loola noqon mid ah qoraallada ugu da'da weyn oo ay ku jiraan P66 gacmeedka caw ah iyo P75 ka 200 ee. In xidhiidh la leh shanta tafatirayaasha na siiyey text aasaasiga ah ee cusub ee 1975, ka dibna siiyey Metzger daabacay buug taas oo uu ku ururiyey comments on doorasho ay ka sameeyey marinka kasta Kitaabka Quduuska ah. Halkan ayuu qoray wargayska comment soo socda:
"Qoraalka weli hore ayaa lagu soo daray si loo yareeyo gudeed u dhexeeya aayadda 8 iyo 10." (2. Metzger, 185 pp.)
Tani ma aha qoraal ah oo cilmi ah, laakiin keliya malo ah oo aan wax caddayn ah. Maxaad sarcaadka, kuwaas oo tafatirayaasha Bible in weli waxaa ka maqnaa tan iyo bilowgii? Waa hagaag, sababtoo ah qoraaladii asalka ahaa ku jira khaladaad, sida laga soo xigtay iyaga, qayb ahaan sababtoo ah gudbinta afka, ay doonayeen in la soo celiyo qoraalka si ay qaab asalka xitaa haddii ay ahayd khalad. Labada qoraalka Byzantine iyo Vulgate waa qoraalka dambe wacdina sida tifatirayaasha kuwan. Laakiin sababta aan aqbalo in xitaa waxaa ku jiray tan iyo bilowgii markii ay far jecel, Vatican-ka, iyo sidoo kale laba ka mid ah qoraallada caw weli hadalkii run? Waayo, qoraalka dib loo eegay qoraalka dambe diinta sida Vulgate ku kala duwan yihiin. Jawaabtu waa in shantii tafatirayaasha model oo dhan ka shaqeeya ayaa la sheegay oo aan ugu wada dambayn ahaa in la raaco Vatican-ka, laakiin waxa uu ahaa kor ku xusan oo dhan ma ah in la raaco "text diinta" oo ah qaab qoraal gacmeedyada Byzantine. Aan soo socda qoraalka Byzantine in kaniisaddu ay Christian daacad ah trad keentay in ka badan shan iyo toban qarniyo ka muhiimsan yahay wax kasta oo kale ahaa. Waxa ay ahayd ka muhiimsan wax guud ee qoraalka iyo waxa ay ka muhiimsan tahay in ay far jecel Vatican iyaga ka gees ah la hadlay ahaa. Waxay ahayd mowqifka antibysantiska oo intaasu waxay ahayd feature ugu kala oo ka mid ah shan tafatirayaasha xulashada qoraalka. Waxa ay ahayd ka muhiimsan wax guud ee qoraalka iyo waxa ay ka muhiimsan tahay in ay far jecel Vatican iyaga ka gees ah la hadlay ahaa. Waxay ahayd mowqifka antibysantiska oo intaasu waxay ahayd feature ugu kala oo ka mid ah shan tafatirayaasha xulashada qoraalka. Waxa ay ahayd ka muhiimsan wax guud ee qoraalka iyo waxa ay ka muhiimsan tahay in ay far jecel Vatican iyaga ka gees ah la hadlay ahaa. Waxay ahayd mowqifka antibysantiska oo intaasu waxay ahayd feature ugu kala oo ka mid ah shan tafatirayaasha xulashada qoraalka.
Mark. 1: 2 ama qorniintii nebiyada Nebi Ishacyaah
In Mark. 1: 2, su'aashu waxay tahay haddii ay tahay waa inay noqdaan 'Nebi Ishacyaah,' ama 'nebiyada'. Waxaa jira labo xigasho, ugu horeysay ka Malachi oo kale uu ka yimaado Isaiah. Sidaa darteed, waa sax in ay qoraan nebiyada. Halkan waxaa ku qoran warbixin kooban oo ka mid ah qoraallada ugu da'da weyn;
Metzger siinayaa comment soo socda in sababta ay u nebi Isayos oo Doorto,
"Sidaa darteed waa ay fududahay in la arko sababta dadka u guuriyeen ayaa bedelay ereyada" Nabiga Isaiah "(akhrinta in FNns ee markhaatiyaal horrayn nooca qoraalka Iskanderiya iyo Western) in ereyada hordhac u sii ballaaran" nebiyada ahaa. "(2 Metzger, bogga . 62)
Sida laga soo xigtay Metzger, Haddaba waxaa fiican in aad doorato "nebi Isayos," xitaa haddii ay FNns aqlabiyad ah qoraallada ee xarfaha waawayn iyo kuwa yaryarba taageeraya nebiyada oo siduu nebi Isayos u ka duwan qoraalka dambe wacdina (ie Byzantine). Sidaas waxa run ahaantii ma jirin model shaqada sayniska inay raaceen, laakiin kaliya isla dhexmarayo ah, kuwaas oo loo maleeyo in qoraalka Kitaabka Qudduuska ah ku jira khaladaad tan iyo bilowgii. Fiiro gaar ah far in Alef (Sinaiticus), taas oo ka kooban khaladaad badan, qalad la mid ah sida ku jirta Matayos. 13:35, halka ay sidoo kale waa nebi Ishacyaah, laakiin xigashada waa Sabuurka 78: 2-dii baadi Tan waxaa si kastaba ha ahaatee ma la ansixiyey markii ay qoraal gacmeedyada kale ee Giriigga qaladka la mid ah.
Mark 9:42 Kii i rumaystaa,
Mark 9:42 Laakiin ku alla kii xumeeya yaryarkan mid ka mid ah kuwaas oo i rumaystay, kanu waa eraygii la ii saaray qoraal gacmeedyada qaarkood. Halkan waxaa ku qoran warbixin kooban ee wax qoraal gacmeedka:
Waxaan eegto kooban ee taageerada waayo, erayadii 'i' waa mid aad ka mid ah qoraal gacmeedyada hore ee ay ka mid yihiin Vatican iyo FNns labada Vulgate iyo in inta badan ee qoraal gacmeedyada la xarfaha waawayn iyo kuwa yaryarba ah oo xoog leh. Laakiin Metzger qoray comments ay FNns ee suurtogal ah in erayada ayaa lagu soo daray ka midka ah halkii ay Mat 18: 6-dii Sababtan awgeed, waxay noqdeen kuwo aan rabin in erayadan oo wuxuu ku riday parentheses. Laakiin sababta ugu weyn ay aadan bixin run ahaantii waa antibysantiska ay model shaqeeya: "Marka ay FNns kala duwan, waa badbaado badan in la doorto text waa in qoraalka dambe diinta, ie kala duwan qoraalka Byzantine. "(1. Metzger, 87 p.)
Matt. 5.22 aan loo cududaari karin
Laakiin waxaan idinku leeyahay, Ku alla kii walaalkiis u cadhoodaa wuxuu iyada oo aan sabab macquul ah, wuxuu masuul ka xukunka noqdo. Halkan waxaa ku qoran erayo aan sabab sax ah laga saaray ee qoraal gacmeedyada Giriigga. In Greek, waa uun eray. Halkan waxaa ku qoran warbixin kooban:
Waxaa FNns taageero xoog leh ka mid qoraallada waaweyn iyo xitaa soo xigtay Aabbayaashow Church of qarnigii labaad iyo wixii ka dambeeyey sabab ansax ma aha dhab ah laakiin Metzger qoray this in comments uu:
"Inkasta oo reading" sabab lahayn "waa mid baahsan ka qarnigii labaad iyo wixii ka dambeeyey, waa badan tahay in ereyga ayaa lagu daray by qofka soo guuriyeen qoraalka si aad u jilciso hor darnaanta Qorniinku, ka badan erayga ayaa laga saaray lahaa sida aan loo baahnayn." (P 11., Metzger 2)
Metzger iyo tafatirayaasha kale arki doonaan oo kaliya sababaha erayga ku waa lagu daray, laakiin ma u furan yahay fikradda ah in qofka soo guuriyeen seegay eray. Maxaad ay sameeyaan doorasho this? Marka aad ogtahay in ay model shaqeeya antibysantiska si aad u fahmin sababta. Waxay dooran qoraalka in duwan ee "text wacdina ka dib (ie Byzantine). Sababta A dheeraad ah ee laga saaray oo aan sabab macquul ah waa in aabbihiis kiniisadda Origen lahaa gacmeedyada in this lahaa, laakiin la wareegay iyada oo aan sabab wanaagsan oo lagu daray. (3. Burgon, 359-360 pp.)
Luuk. 2:33 Joseph iyo aabbihiis
Qoraallada qaarkood waxay leeyihiin "Markaasaa aabbihiis iyo hooyadiis ka yaabeen ..." halka qoraallada kale waxay leeyihiin "Markaasaa aabbihiis iyo hooyadiis ka yaabeen ...". Haddii ay jirto in ay Joseph iyo aabbihiis waa mid aad u muhiim ah in view of dhalashada gabadh bikrad ah. Halkan ka baxay kooban:
Waxaan eeg guudmarka in aqlabiyadda qoraal gacmeedyada Giriigga ah ee xarfaha waawayn iyo kuwa yaryarba taageero siiyaan inuu noqdo Yuusuf, iyo sidoo kale inta badan oo ka mid ah qoraallada Latin jir. In isku duwidda Tatian ah afarta Injiil sida uu sameeyey oo ku saabsan 170 sano, ayaa sheegay in Josef. Laakiin Cyril qoraallada Yeruusaalem, ka shaqeeya ee 300 bartamihii, ayaa sheegay in aabbihiis.
Metzger ayaa sheegay in ay (ie, shantii tafatirayaasha) ay aaminsan yihiin in Church ee saxo qaladka si ay u ilaaliyaan dhalashada gabadh bikrad ah. (2 Metzger, pp. 111-112) Waxaa FNns qoraal gacmeedyada hore oo labada taageero siiyaan Joseph iyo aabbihiis. Waxaad ma caddayn karo wax, laakiin waxa aad u leeyihiin in ay doortaan mid ka mid ah fursadaha. Metzger iyo tafatirayaasha kale dooran oo aan caddayn aabbihiis la xaq ah in gardarrada waxaa jiray tan iyo bilowgii dibna saxo Church ee qaladka. Laakiin "qalad" waxaa jiray tan iyo bilowgii, ka dibna, wararka la isla dhexmarayo oo ku salaysan male ah furin in khaladaad si toos ah waa in ay ka kala dhaceen gudbinta afka. Intaa waxaa dheer, waxaa sii warar ah furin in kala iibsiga ka dhacay afka oo kaliya. Waxay sii wadaan in ay raacaan ay model shaqeeya antibysantiska, in ay doortaan qoraalka in duwan ee "text wacdina ka dib", ie qoraalka Byzantine.
Matt. 6: 1 Gift ama shuqullo wanaagsan
Inkasta oo taageero ma aha sida xooggan ee hadiyad ka mid ah qoraallada ugu da'da weyn si FNns ah qoraal gacmeedyada hore ee yar in ay ku siiso taageero. Intaa waxaa dheer FNns hadiyad ka mid ah qoraallada Tatian iyo Origen ee. Tatian ahaa firfircoon ee 100 iyo Origen dambe ee hore 200 ee. Mid ka mid ah ma noqon baahan a dhaleecayn qoraal ah oo caan ah si ay ugaaraan läsvarianten in "iska jira fulinta camalka wanaagsan" waa call a qaldan taas oo lid ku ah qoraalka kale ee Kitaabka. Sida labada fursadaha soo celin xilligii hore Christian ogan karo, doorashada waa in ay ahaataa dabiici ah in la aqoonsado hadiyadda sida dhabta ah sida qoraalka waa in wada noolaanshaha la aayado kale Kitaabka Quduuska ah. Waa Rabbiga qudhiisa ayaa pipe Qorniinka oo dhan. Laakiin nasiib daro dooran tafatirayaasha, kuwaas oo hore beenta ah waxa ku qumman. Dhawr ka mid ah tifaftirayaasha dareemay in ay jireen qaladaad qoraalka sababta oo ah gudbinta afka of Church tan saxo. (5. Black, p. 633. 6. Metzger, p. 86), laakiin ereyga Ilaah hoos maray afka by dadka waa Been Abuur ah oo la beeniyay by Rabbiga qudhiisa ayaa marka uu sheegay in "Kitaabka oo dhan la siiyo by Ruuxa Ilaah." (2 Tim. 3:16)
Mark. 10:24 maalka isku halleeya
Inta baaxad weyn oo qoraal gacmeedyada hore ee Giriigga iyo Latin siiyo taageero si ay erayada ka maqan in labada qoraal gacmeedyada Vaticanus iyo Sinaiticus. Metzger siinayaa comment soo socda: Darnaanta hadalkii Ciise waxaa u jilcincy by hordhaca ah ee kvalifkation kale xannibaya ay guud oo waxay soo geliyeen oo u dhaw in macnaha guud ee qoraalka. (2 Metzger, 90 p.) Waxa aan ahaa wax qoraal gacmeedka guud ahaan in ay go'aansatay in ay la doortay iyada oo aan la malayn karo, taasoo waafaqsan antibysantiska ay sal ka shaqeeya model.
Luuk. 9:35 jecel yahay ama loo soo xushay
Qoraalkani wuxuu guud qoraal gacmeedka waxay bixisaa taageero waayo, Wiilka la jecel yahay. Metzger ee comment waa:
Asal ahaan waxa ku jira Luke shaki joogsadeen doortay, oo waxay dhacdaa halkan oo keliya Axdiga Cusub dhexdiisa. Habka labaad, kaas oo ku lug leedahay muujinta a badan, waxaa sabab u ah wada qoraal Wiilka FL ätning la jecel yahay. (2. Metzger, 124 pp.)
na Mfråga: Laga soo bilaabo waxa Ciise la doorto? Sidee baa nin keliya oo keliya mid ka mid ah asalka ah ayaa la soo xulay, waa in aan Wiilka waxaa lagu qaadan karaa? Waxaan leenahay laba beddelan yihiin ku dhowaad sida jir uu ka soo xusho. Metzger gabi ahaanba waa qaar in ay asal ahaan waxa uu ahaa mid ka mid ah la doortay. Haddii aad aaminsan tahay in Kitaabka Quduuska ah waxaa la siiyey Ruuxa Ilaah, laakiin qoraalka ayaa la hor maray ka afkayga la imperfection aadanaha, markaas FNns qalad badan oo u baahan in la saxo. Dabadeedna wuxuu noqon doonaa macquul ah si ay sheegayaan in Personne ayaa yiri: "Kitaabka Quduuska ah tan iyo bilowgii jira iyo shuqulkii nin oo dhan" (8 Swedish Bible Society Annual) Personne ahaa mid ka mid ah saddex nin oo na siiyey 1917 kaniisad Kitaabka Quduuska ah. Haddii aad aaminsan tahay in Personne, Kitaabka Quduuska ah waa shaqo ah oo nin ka dibna waxaad dooran kartaa doortay. Laakiin haddii aad aaminsan tahay in Kitaabka Quduuska ah waa Ilaah-ku neefsaday oo la ilaashaa, ka dibna dooro Wiilkayga aan jeclahay.
Yooxanaa. 6:47 Kii i rumaystaa, on
waxyaabaha guud ee qoraal gacmeedka siinayaa taageerada ay erayada ay iga qabaanna waa run, inkastoo dhowr qoraaladii hore ee Giriigta ka tegid erayadan. Tatian sameeyey isku duwidda xogta ka mid ah afarta Injiil oo ku saabsan 170 sano, halkaas oo uu ila. Metzger siinayaa comment soo socda:
Intaa waxaa dheer waxa ay ii ahayd labada dabiiciga ah iyo kuwa lama huraan. la yaab leh waxa ay tahay in ilaa xad badan oo ay soo guuriyeen caabiyay jirrabaadda. Haddii erayada markii hore joogin qoraalka, sidaas darteed ma jiro mid ka mid ah sharaxaad wanaagsan sida in sababta erayada ayaa laga saaray. (2. Metzger, 183 pp.)
Waxaa FNns aan qoraal gacmeedyada badan ayaa soo guuriyeen baadi this. waxyaabaha guud ee qoraal gacmeedka ina siinayaa laba fursadood. Qofna ma caddayn karo in erayada ahaayeen tan iyo bilowgii ama la la'yahay. Shanta tafatirayaasha sii sida uu model shaqeeya antibysantinska, in ay doortaan qoraalka in duwan ee "text wacdina ka dib" sabab ah in ay arki karaan hal sabab suurto gal, ie kaliya in kuwa soo guuriyeen text saxo wixii la halkan ka maqan. Waxay u furan yahay fikradda ah halkii cad ma ahaayeen in qof soo guuriyeen seegay kuwa laba eray u kasayn oo markaas wareejiyo baadi this on dadka kale nuqul aad. Haddii erayada maqan yihiin sidaas darteed waa ayaa sheegay in ku alla kii rumaystaa, wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah, laakiin markaas ka maqan runta muhiim ah in waa in aan rumaysan in Ciise si uu lahaado nolosha weligeed ah.
1 Korintos. 15:47 Rabbiga samada ka
Sida waayo, awowayaashood kaniisad sida soo socota awowayaashood kaniisad Rabbiga kula wuxuu qoray, oo Tetullianus, Hippolytus iyo Victorinus of Pettau ka 200 iyo Basil weyn ka 300 ee. The Aabbayaashow socda Rabbiga ku qoray haysan: Cyprian ka 200 ee, iyo Hilary of Poitiers iyo St. Athanasius ka 300 ee. Taas waa in aad doorato? Waxaa FNns taageero hore ee labada fursadaha, labada awowayaashiin kiniisadda iyo qoraaladii hore ee Giriigta ka. Mid ka mid ah qoraalka diinta, ie gacmeedyada Byzantine leeyihiin Sayidka iyo text kale ee diinta, ie gacmeedyada Vulgate aadan haysan Rabbiga. Metzger comments on ay doortaan in ay ka tegid Rabbiga. "Haddii erayga (Eebaha) asal ahaan waxaa jiray, sidaas FNns jirto sabab u ahayd in laga saaray." (2 Metzger, p. 501-502) Mar labaad waxa uu noqonayaa mid iska cad in iyagu ma ay u furan yihiin sababtoo ah waxa ay noqon kartaa qalad qoraal, in qof soo guuriyeen seegay eraygan. Sabab kale ayaa laga yaabaa in Eusebius, kuwaas oo ka soo qaadeen barsahada in Constantine Emperor ah. Eusebius aan rumaysan in Ciise uu ahaa Ilaah. Tan waxaa hore u ahaa kala duwan oo u dhexeeya qoraallada kala duwan, sida FNns sidoo kale waxaa macquul ah in uu u doortay gacmeedyada ku yiil waafaqsan caqiidadiisa. Waxaa FNns saynisyahano text qabaa labada qoraal gacmeedyada jir Alef (Sinaiticus) iyo B (Vatican) ka kutaabka kuwaas Emperor Constantine amartay by Eusebius. (7. Skeat, 21-22 pp.) Tan waxaa hore u ahaa kala duwan oo u dhexeeya qoraallada kala duwan, sida FNns sidoo kale waxaa macquul ah in uu u doortay gacmeedyada ku yiil waafaqsan caqiidadiisa. Waxaa FNns saynisyahano text qabaa labada qoraal gacmeedyada jir Alef (Sinaiticus) iyo B (Vatican) ka kutaabka kuwaas Emperor Constantine amartay by Eusebius. (7. Skeat, 21-22 pp.) Tan waxaa hore u ahaa kala duwan oo u dhexeeya qoraallada kala duwan, sida FNns sidoo kale waxaa macquul ah in uu u doortay gacmeedyada ku yiil waafaqsan caqiidadiisa. Waxaa FNns saynisyahano text qabaa labada qoraal gacmeedyada jir Alef (Sinaiticus) iyo B (Vatican) ka kutaabka kuwaas Emperor Constantine amartay by Eusebius. (7. Skeat, 21-22 pp.)
1 Tim. 3:16 Ilaah cad ee hilibka
Halkan su'aashu waxay tahay haddii ay jiri doonto wax). A xaqiijin aad u xoog badan in Ciise yahay Ilaah, Ilaah, ama uu (macno ahaan:. Cad ee hilibka bidcinimo wax badan oo, sida Markhaatiyaasha Yehowah, adkaan doonto inuu ku guuleysto taageerayaasha run in Ciise yahay Ilaah u muuqday in hilibka ayaa laga tegay igmaday . Dhowr Aabbayaashii kaniisaddii hore waa in wuxuu qoray, laakiinse aabbihiis ayaa kiniisaddii Gregory of Nyssa, oo ka shaqeeya on the 300 ee, Ilaah ku qoraalladooda. sida laga soo xigtay Metzger, waxay u maleeyeen waxay ahayd saxo ereyga, kaas oo sida printer ah ayaa laga yaabaa in fikirka waxaa loo higgaadiyo qaldan oo taas waa ay isbedeshay Ilaah, doorasho kale oo Metzger iyo tafatirayaasha kale ahaayeen furan yahay qof walba inuu printer a modified xagga Ilaah iyo ilaa "la siiyo sax weyn iwm." Metzger culayskan ay ka mid yihiin taageero Origen maxaa yeelay, waxay u noqon in, laakiin waxaynu og nahay in Origen ma ay rumaysan Madhabta saddex midnimada ah. (2. Metzger, p. 573-574) Waxaa jiray dagaal ilaahnimada ee 300 ee ma aha fog-soo kaxeeyey in loo qaato in ay jiraan kuwo ciidamada kuwaas oo doonayay in ay Ilaah ka qoraalka ka saar.
Shanta tafatirayaasha text aasaasiga ah ee cusub ee ra'yi ah in this qaybta dhan waaweyn ee qoraalka ee Injiilka Markos waa dheeraadka ah. Isku dayo la sameeyey si ay samayso Kitaabka Quduuska ah ka soo saarto oo dhan iyo toban Aayado, laakiin markaas doortay akhristayaasha badan oo Bible ma si ay u iibsadaan tarjumaadda. Sidaa darteed, ma dhicin tarjumadood ee casriga ah in meesha laga saaro, kuwaas oo ahaa laba iyo toban Aayado, laakiin qor in ay tahay waqti dheeraad ah oo aan ka tirsan Injiil asalka ah, oo waxay khuseysaa, tusaale ahaan.. 1917, Bible 2000 King James iyo nuBibeln. caddayn ah in Aayadahani waa dhab ah waa mid aad u xoog badan. Waxaa FNns 620 qoraal gacmeedyada Giriigga kuwaas oo ka kooban Mark, in 618 oo ka mid ah FNns, kuwaas oo ahaa laba iyo toban aayaadka leh. Waxa keliya ee labada qoraal gacmeedyada Alef (Sinaiticus) iyo B (Vatinanus) in ay maqan yihiin. qoraaladii hore ka waqti isku mid ah, A, waxay leeyihiin oo dhan laba iyo toban aayaadka. All qoraal gacmeedyada Latin jir ah ay leeyihiin aayaadka K marka laga reebo, taas oo uu leeyahay dhammayn gaaban. Aabbayaashii kaniisaddii hore soo qaadan kuwan iyo toban Aayado, ka ca. Justin Martyr 150 CE .. wixii ka dambeeyey iyo Irenaeus xigtay sanadka 180 Aayaddan oo dhan ka Mark. 16:19. Sidee Aayado lagu dari jiray, haddii ay 200 oo sano ka hor Sinaiticus iyo Vaticanus ku qoran? Intaa waxaa dheer, in labada qoraal gacmeedyada kuwan, Alef iyo B tegayaa Aayado, ka tago meel bannaan oo aad u badan oo madhan, sida calaamad u tahay in ay ka maqan text Bible. Malaha in ay rajaynayaan fnna qoraalka maqan iyo ka dib waxaa qori. Dhaleeceyn Text ku doodaya in ay laba iyo toban aayaadka ugu danbeysay ee ay leeyihiin style ka duwan sababtoo ah laba eray oo la mid ah la la'yahay, dib / dhabarka iyo isla markiiba, laakiin cilmi-qoraalka Burgon ayaa baadhay arrinta oo lagu ogaaday in hadalladaas ayaa sidoo kale ka dhiman dhowr cutub kale ee Mark. Waxay sidoo kale ku doodaya in Eusebius iyo Jerome u baahnaydeen aayadahan inta badan qoraal gacmeedyada uu. Laakiin taasi waa heer sare oo khilaafsan, waayo, haddii kale ay ku doodayaan u dooda qoraalka aasaasiga ah ee cusub in aanay tirada qoraallada muhiimka. Laakiin kiiskan, tirada saamaynta lama filaan ah. Waxaa FNns midkoodna doodaha ay qabtaan dib u eegis muhiim ah. Waa fikrad quruxsan fog-soo kaxeeyey in qof heli lahaa in lagu daro laba iyo toban Aayado, marka aad ogtahay waxa cawaaqib xun yihiin haddii aad ku darto ama ka jar dhab.
Ma aha wax qoraal gacmeedka wadarta ama sheegyada aabbayaasha kaniisada oo wuxuu sameeyey wax Metzger iyo tafatirayaasha kale loo arkaa aayadahan ku daray laakiin halkii ay model shaqada taas oo ka koobnayd laba xeerarka:
Marka B (Vatican) iyo Alef (Sinaiticus) waa lagu heshiiyey, laakiin ka duwan qoraallada kale waxaannu raaci laba kuwan.
Marka FNns kala duwan sidaas darteed waxaa fiican inaad doorato text waa in qoraalka dambe diinta, ie kala duwan gacmeedyada Byzantine.
Waxaan hadda martay laba iyo toban marinnada si ay u muujiyaan sida ay doorashada ee qoraalka qoraalka aasaasiga ah ee cusub ee u baxay inuu ka. Qaar ka mid ah aayado kuwaas khuseeyaan ee is burinaya iyo kuwa kale marka la eego taageerada Ciise Ilaahnimadiisa. taageerada qoraallada kala duwan waxay noqon kartaa kala duwan oo ka mid ah meel kale. Mararka qaarkood taageerada ka mid ah qoraallada ugu da'da weyn ka xoog iyo mararka qaarkood taagta daran. Laakiin marar aad u badan text / Helay taageerada Text Byzantine ka mid ama ka badan oo aad u gacmeedyada Giriigga jir. Seynisyahanno Text ay sheegayaan in maanta waxaan ay helaan qoraallada ka weyn oo ka wanaagsan, waxay lahaayeen in 1500s ah, laakiin B (Vatican) waxaa hore u ogaan lahaa in 1500s iyo Alef (Sinaiticus) run ahaantii ma aha far wanaagsan. Waxaa xaqiiqo ah oo loo yaqaan in khaladaad qoraal FNns ka badan oo qoraal gacmeedka this. Noocan oo kale ah far xun ma aha in halkaas in ay cabeen iyo waxa uu helay qoraalka Giriigga cusub. Inkastoo helitaanka gacmeedyada fiican yihiin maanta marka loo eego 1500s ah, waxa uu noqonayaa mid su'aal muhiim ah: Yaa waa in xulashada? Kuwa Nasaara iyo waxay aaminsan yihiin in Kitaabka la siiyo by Ruuxa Ilaah iyo dhawray by siiya Rabbiga ah ee aannu mar samaynta doorasho ah qoraalka. Laakiin kuwa aan rumaysan in Qorniinku la siiyo by waxyi, oo ma aha kuwo Rumayn in Rabbigu sii raagayaan qoraalka, inay sameeyaan doorashada kale. Maxaa yeelay, iyagu waxay aaminsan yihiin in la isugu gudbiyo afka, waxay ka dhigan tahay in ay tahay ammaanka badan marka FNns kala duwan ee qoraalka, dooro text waa in qoraalka dambe wacdina kala duwan, tusaale Byzantine. In dib u eegis this, waxaannu ku tirinnaa karaa in haddii la doorto uu ahaa dhexeeya qoraallada Byzantine iyo Vulgate si ay u doorteen in laga daayo qoraalka Byzantine. Waxay doonayeen oo dhan kor ku xusan in la raaco ay qoraal gacmeedka B jecel (Vaticanus), laakiin waxaan sidoo kale ka arki kartaa jeer marka ay dooratay in ay ka gacmeedka this tagaan maxaa yeelay waxay ahayd waafaqsan gacmeedyada Byzantine iyo in doorasho u dhexeeya socda B (Vatican) ama laga daayo qoraalka Byzantine, sida waxay doorteen in laga daayo qoraalka Byzantine. antibysantiska Tani model in uu si fiican u lama yaqaan ka shaqeeya, mid ka akhrisan kartaa in mid ka mid ah buugaagta Metzger ee. (1. Metzger, p. 87) Tani ma aha model ah shaqada sayniska laakiin ku salaysan cagajiidka ah aan buuxin gacmeedyada Byzantine iyo Text Helay. Noocan oo kale ah model shaqo ma aha oo kaliya laakiin ridis ah darana unbiblical maxaa yeelay waxa ay iska dhega maragga Kitaabka isaga qudhiisa ku saabsanaa.
Haddii dadka Masiixiyiinta ah waxay aaminsan yihiin in ereyga Ilaah waa pipe iyo ceshan lahaa in la sameeyo doorashada, sida lahaa qoraalka Giriigga ah ee asalka ah, taas oo uu noqday FNns ku matalayay wax qoraal gacmeedka wadajir ah, ie qoraalka Byzantine oo markaas sadexdii in la sii wado Text ka helay. Laakiin nasiib daro, qoraalka cusub ee aasaasiga ah, oo dhan unu iyo is burinaya ee ay jirtay aasaas u ah ku dhowaad dhammaan tarjumaadaha Swedish inta lagu guda jiro 1900 iyo 2000 hore, iyadoo laba ka reeban. dib u eegis ulo ka Karl XII Bible 1923 KJV, labadaba ku salaysan Text ka helay. Kaliya ee Axdiga Cusub ku saabsan isbedelada ku wareegsan 3300 meelo! Waayo, kuwa doonaya in ay wax badan ka ogaado, waxaan ku talinaynaa in booqanaya website-ka, bibel.se , halkaas oo aad ku raaxaysan karaan videos iyo articles badan iyo doodo.
Bo Hagstedt, Guddoomiyaha
Eeg qaybaha hore:
Kitaabka Quduuska ah - An text aasaasiga ah ee aan sax ahayn - qayb 1 of 5
Kitaabka Quduuska ah - An text aasaasiga ah ee aan sax ahayn - part 2 of 5
Kitaabka Quduuska ah - An text aasaasiga ah ee aan sax ahayn - qayb 3 of 5
Kitaabka Quduuska ah - An text aasaasiga ah ee aan sax ahayn - qayb 4 of 5
Kitaabka Quduuska ah - An text aasaasiga ah ee aan sax ahayn - qayb 5 of 5
website toobadda Kitaabka: www.bibel.se
Toobadda Bible - Old Testament
Waxaan soo iibsaday KJV ah | apg29
Bruce M. Metzger, Text ee Axdiga Cusub, Waa Gudbinta, Musuqmaasuqa iyo Soo Celinta, edition 4th, Oxford University Press in 1968.
Bruce M. Metzger, Commentary A qoraal on New Testament Giriigga, edition 2nd, Deutsche Bibelesellschaft / Jarmal Bible Society, Stuttgart, daabacaadda 8aad. Sanadkii 2007.
John William Burgon, Dib loo Eegay, daabacaadda labaad, Dean Burgon Society Press, New Jersey, 2000.
Ja Moorman, Early gacmeedyada, Aabbayaashow Church, iyo Version Idman, Kitaabka Quduuska ah ee Maanta Press, New Jersey, 2005. Moorman ayaa sameeyay ku FNns caddayn qoraal gacmeedka iyo xataa xigtay Aabbayaashow Kaniisadda. Ilaha uu isticmaalo waa Tischendorfs edition siddeedaad, Nestlé-Åland version 26, United Bible Societies edition saddexaad ee 1975, maps of qoraal gacmeedyada ee Text ee Axdiga Cusub by Kurt iyo Barbara Åland, koob CE Leggs ee Matthew iyo Mark, dhowr xigashooyin yihiin laga soo qaatay von Soden, Hodges iyo Farstad, xog Åland ee Injiillada iyo Hoskier Muujintii.
Matthew Black, Commentary Peake ee Kitaabka Quduuska ah, dib loo saxay 1962nd Edition
Bruce M. Metzger, Axdiga Cusub ayaa, Its Background, Growth, iyo Content, Abingdon Press, 1965th
TC Skeat, Codex Sinaiticus iyo Codex Alexandinus The, London, British Museum 1963.
warbixinta sannadlaha ah Swedish Bible Society ayaa, daqiiqo ee April 21 1886.